ပိုက်ဆံက ချစ်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ – BaHuTuTa
ပိုက်ဆံဝင်လာအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ အလုပ်လုပ်တာ တခုတည်းနဲ့မပြီးပါ။ ပိုက်ဆံကိုစိတ်ချမ်းသာအောင် ထားဖို့လိုပါတယ်။ ပိုက်ဆံက နေ့တိုင်းလိုလို ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကနေ ထွက်သွားလိုက် ဝင်လာလိုက် ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လား။ ဘာလုပ်ရဦးမှာလဲ။ ဘာလုပ်ဖို့လိုသေးတာလဲ။ သူဌေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ် ကို ဘယ်လိုသုံးသလဲဆိုတာကို ရှင်းပြပါရစေ။
၀၁. ပိုက်ဆံအိတ်အရှည်ကို သုံးပါ။
ပိုက်ဆံအိတ်အရှည်ကိုသုံးဖို့ အကြံပြုတာကတော့ ပိုက်ဆံကိုတွေကို စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ ပိုက်ဆံအိတ်အတွင်းမှာ နေစေချင်လိုပါ။ တကယ်လို့ ခေါက်ပိုက်ဆံအိတ်ကို သုံးသောအခါ ပိုက်ဆံအနေနဲ့ ကျင်းကျင်းကြပ်ကြပ်နေရမှာပါ။ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ တကယ်လို့ ကိုယ်ကသွားတည်းသောဟိုတယ်က အခန်းက ညစ်ပစ်နေပြီး ကျင်းနေရင် ဘယ်လိုနေမှာလဲ။ပိုက်ဆံမှာလည်း အတူတူပါပဲ။ သူ့ကိုဂရုစိုတ်သောသူကို သူကလည်းပြန် ဂရုစိုက်မှာပါ။
၀၂. ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ မလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေကို မထည့်ပါနဲ့။
ပိုက်ဆံအိတ်ဟာ တစ်နေ့လုံး ကိုယ်နဲ့မကွာရှိနေတာပါ။သူ့အထဲကို မလိုသောအရာတွေကို ထည့်ရန်မသင့်ပါ။ သူ့အထဲကိုဈေးက ဘောက်ချာတွေ ဘာရယ်လို့မဟုတ် ထည့်ထာတဲ့ စာရွက်တွေ အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ မလိုသောအရာတွေကို သပ်သပ်ထုတ်ထားလိုက်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။
၀၃. ပိုက်ဆံအိတ်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် မမေ့ပါနဲ့။
ကိုယ်နဲ့မကွာရှိတဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ကို အတွင်းရော အပြင်ပါ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖူးပါသလား။ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဝယ်ပြီးသောအချိန်ကနေ အချိန်ပေးပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ နည်းပါတယ်။ ပိုက်ဆံအိတ် ပိုင်ရှင်တောင် တနေ့တခါရေးချိုးသေးတာပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကလေးကိုလည်း တနေ့တခါလောက် သန့်ရှင်းရေးလုပ်စေချင်ပါတယ်။
၀၄. ပိုက်ဆံတွေကို ညီညီညာညာ စီထားပါ။
ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံရွက်လေးတွေဟာ မညီမညာမဖြစ်နေဘူးလား။ ပိုက်ဆံရွက်လေးတွေကို ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် စီထားစေချင်ပါတယ်။ ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် စီထားမှသာလျှင် ဈေးဝယ်သောအခါ ပိုက်ဆံကိုထုတ်ရမှာ လွယ်ကူသလို ပိုက်ဆံအိတ်ကလေးမှာလည်း သန့်ရှင်းသပ်ရပ်နေမှာ အမှန်ပါ။ အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားခဲ့သောအချကါကလေးတွေဟာ သူဌေးတွေက လက်တွေ့လုပ်နေတဲ့အချက်လေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဌေးတွေဟာ ပိုက်ဆံချမ်းသာတာတခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ပိုက်ဆံကိုလည်း တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာကို သိစေချင်တဲ့အတွက် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။